छवि सापकोटा – Himalaya Television
अझै तंग्रिएन कोरोनाले थलिएको पर्यटन व्यवसाय, सरकार मुकदर्शक (भिडियो रिपोर्टसहित)
६ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । विश्वभरी महामारीको रुपमा आएको कोभिड–नाइन्टिनले नेपालको पर्यटन क्षेत्र धरासायी नै बनायो । अन्य व्यावयायिक क्षेत्रले बिस्तारै गति लिँदै गर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथामिकता दिएको छैन । त्यसैले पर्यटकको आगमन बढ्न सकेको छैन ।...
बेमौसमी वर्षाका कारण १० अर्बको नोक्सानी, चामल आयात बढ्ने (भिडियो रिपोर्टसहित)
५ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । भित्र्याउन ठिक्क परेको धानखेती बेमौसमी वर्षाले नष्ट गर्दा अर्बौँको क्षति भएको छ । अविरल वर्षाको कारण २० लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको धानबालीमा असर गरेको छ । वर्षाकै कारण २६ लाख मेट्रिक टन धानमा क्षति...
राजनीतिक दलको आवरणमा यसरी बढ्दै भ्रष्टाचार (भिडियो रिपोर्टसहित)
१९ असोज २०७८ काठमाडौं । विकासन्मुख देश नेपाल, त्यसमाथि अस्थिर सरकार । राजनीतिक मुखुण्डो लगाएकाहरुले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदा देशमा भ्रष्टाचारको जरा गहिरिँदै गएको छ, भ्रष्टाचारी मोटाउने र आम जनता दुब्लाउने गति बढेको बढ्यै छ। भ्रष्टाचारको लहरा यतिसम्म फैलिएको छ...
एमाले विधान महाधिवेशन : के भन्छन् भारतबाट आएका प्रतिनिधि ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१६ असोज २०७८ ललितपुर । ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको रौनक दोस्रो दिन पनि उस्तै छ । देश तथा प्रवासबाट आएका ६ हजारभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको चहलपहलले गोदावरीको माहोल रंगीन बनिरहेको छ। यो महाधिवेशनमा भाग लिन भारतबाट...
एमालेको विधान महाधिवेशनको ‘व्यवस्थापन’ (भिडियो रिपोर्टसहित)
१५ असोज २०७८ काठमाडौं । विगतमा अधिकांश राष्ट्रियस्तरका सभा सम्मेलन शहरभित्रै केन्द्रित हुने गरेका थिए । तर एमालेले आफ्नो पहिलो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा गरेको छ । काठमाडौको कोलाहलबाट टाढा हुनुका साथै कार्यक्रमस्थलको क्षेत्रफल समेत ठुलो हुँदा प्रतिनिधि बस्ने...
८ असोज २०७८ काठमाडौं । नेपालमा चेकमार्फत हुने कारोबारबाट ठगिने बढ्दै गएका छन् । लेनदेनमा ठूलो रकमको चेक दिने तर त्यो खातामा पैसा नै नहुने प्रवृत्ति बढेको छ । र पछि गएर चेक दिने व्यक्ति नै फरार हुने गरेका...
प्रहरीको आलोचना : स्याबासी पाउने लोभमा हतारमा निष्कर्ष ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
६ असोज २०७८ काठमाडौं । संखुवासभा हत्याकाण्डबारे प्रहरीले एक साताको अवधिमा संदिग्धबारे फरक विवरण सार्वजनिक गरेपछि प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको छ । घटनाको एक सातामै एक मात्र अभियुक्त लोकबहादुर कार्की भएको निष्कर्ष निकालेको प्रहरीले १४ दिनपछि अन्य ४...
संसदमा देखिएन न्यूनतम मर्यादा (भिडियो रिपोर्टसहित)
४ असोज २०७८ काठमाडौं । एमालले कारबाही गरेका १४ सांसदको सभामुखले सूचना टाँस नगरेसम्म संसद चल्न नदिने पार्टीको निर्णयअनुसार पहिल्ला पाँचवटा संसद बैठक अवरुद्ध गरिसकेको छ । एमाले अवरोधका कारण संसद बैठक नियमित त हुन सकेको छैन तर कतिपय...
धन कमाउने आशामा विदेश गएका बाकसमा फर्केपछि…. (भिडियो रिपोर्टसहित)
२ असोज २०७८ काठमाडौं । वर्षेनी लाखौँ नेपाली रोजगारीको लागि बिदेश गइरहेका छन । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । तर रोजगारीमा गएकाले अकालमै विदेशमा ज्यान पनि गुमाइरहेका छन् । यो दृश्य हो रोजगारीको शिलशिलामा मलेसियामा ज्यान...
२० भदौ २०७८ काठमाडौं । मिस टिन नेपालको अडिसन राउण्ड पार गर्दै २५ जना प्रतियोगी अहिले ट्रेनिङमा व्यस्त छन्। काठमाडौ जेसिसले गरेको मिस टिन नेपालको फाइलन आगामी असोज २ गते हुँदैछ । मिस टिन फाइलनको तयारी स्वरुप प्रतियोगीहरु आफनो...
सुनसान सिंहदरबार : मन्त्री नै नभएपछि मन्त्रायलमा पनि छैन चहलपहल (भिडियो रिपोर्टसहित)
१८ भदौ २०७८ काठमाडौं । देशको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय यति बेला सुनसान छन् । राजनीतिक भागबण्डाले नयाँ मन्त्रीको चयनमा ढिलाई हुँदा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका हुन् । मन्त्री नै नभएपछि मन्त्रायलमा चहलपहल छैन । मन्त्रीविहीन मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत...